ကန့်ဘလူမြို့နယ် လင်းနို့ဂူ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အသိပညာပေးစခန်းကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခရီး? - Yangon Media Group
ကန့်ဘလူမြို့နယ် လင်းနို့ဂူ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အသိပညာပေးစခန်းကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခရီး?
ကန့်ဘလူ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၆
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ခရီးသွား နေရာအသစ်များကို စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ ဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက် နံနက်ပိုင်းက ကန့်ဘလူမြို့ နယ် ဇင်းကျေးရွာအနီးရှိ လင်းနို့ ဂူ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အသိပညာ ပေးနှင့် အပန်းဖြေစခန်းကို ဖွင့်လှစ် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ လင်းနို့ဂူ သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေသည် ရွှေဘို၊ မြစ်ကြီးနားကားလမ်း ဇင်းကျေးရွာအနီး မိုင်တိုင်အမှတ် ၆၅/ဝ မှ အရှေ့ဘက် ငါးမိုင် နှစ်ဖာလုံ အကွာတွင်ရှိပြီး ဂုံဂါးကြိုးဝိုင်းအတွင်း တည်ရှိကြောင်း၊ သဘာဝ ထုံး ကျောက်ဂူအဖြစ် ရှိနေသည့် လင်းနို့ဂူတွင် လက်ရှိ လင်းနို့အကောင် ရေ တစ်သန်းကျော် နေထိုင်ကျက်စားလျက်ရှိသဖြင့် ယင်းသို့ထူးခြား သည့် သဘာဝအနေအထားများ၊ သဘာဝထုံးကျောက်ဂူအတွင်း သန်းနှင့်ချီ၍ နေထိုင်သည့် လင်းနို့များ၊ သဘာဝအပင်များနှင့် တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်များကို ကာကွယ်စောင့် ရှောက်ခြင်းဖြင့် သဘာဝအခြေခံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေရေးအတွက် သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ပညာပေးစခန်း အဖြစ် ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်သည်။
”လင်းနို့ဂူ သဘာဝထိန်းသိမ်း ရေးနယ်မြေက စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကန့်ဘလူမြို့နယ် ဇင်းကြိုးဝိုင်း၊ ဂုံဂါးကြိုးဝိုင်း၊ ဘောကြိုးဝိုင်းအတွင်း ဧရိယာ ၂၅၆၄ဝ ဒသမ ၅ ဧကနဲ့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ် ဂုံဂါးကြိုးဝိုင်းအတွင်း ဧရိယာ ၂၇၅၉ ဒသမ ၆ ဧက ပါဝင်ပါတယ်။ သဘာဝသစ် တော၊ သစ်ပင်၊ ကပ်ပါးပင်တွေနဲ့ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များစွာ နေထိုင်ကျက်စားပါတယ်။ လက်ရှိစခန်းမှာ သစ်တောပြခန်း၊ အပန်းဖြေ လှေစီး ရေကန်နဲ့ လိပ်မွေးမြူရေးကန်ရှိ ပါတယ်”ဟု စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး သစ်တောဦးစီးဌာန ညွှန်ကြား ရေးမှူး ဦးသန်းစိုးက ပြောသည်။ လင်းနို့ဂူ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အသိပညာပေးနှင့် အပန်းဖြေ စခန်းရှိ အဆောက်အအုံများ၊ ပြခန်း၊ ဧည့်ရိပ်သာ၊ ဝန်ထမ်းနေအိမ် စ သော အဆောက်အအုံများနှင့် ရေကန် စသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ထာဝရသတ္ထုတူးဖော်ရေး ကုမ္ပဏီမှ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းထား ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အသိပညာပေးနှင့် အပန်းဖြေစခန်း ဖွင့်ပွဲသို့ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာမြင့်နိုင်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ် တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဒေါက်တာရဲမြင့်ဆွေ၊ တိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက် ဖဲကြိုး ဖြတ် ဖွင့်လှစ်ပေးကြပြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာမြင့်နိုင်၊ သစ်တောရေး ရာ ဒုဝန်ကြီး ဒေါက်တာရဲမြင့်ဆွေတို့က အမှာစကား ပြောကြားကာ ထာဝရ သတ္ထုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီမှ ဒါရိုက်တာဦးမောင်ကိုက ဆောက် လုပ်လှူဒါန်းရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းကောင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး သစ်တောဦးစီးဌာန ညွှန် ကြားရေးမှူး ဦးသန်းစိုးက လင်းနို့ဂူဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို လည်းကောင်း ပရိုဂျက်တာဖြင့် ရှင်းလင်းပြောကြားကြသည်။
၂ဝ၁၈ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါတီကြီးအချို့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ သတ်မှတ်ရွေး?
ဒီဘရူနီ၏ ဒဏ်ရာအတွက် ပွဲဆက်များခြင်းကို ဂွါဒီယိုလာ အပြစ်တင်
သုံးခွတွင် ပင်လယ်အတွင်း လေပွေတိုက်ခတ်မှုကြောင့် ငါးဖမ်းစက်လှေနှစ်စင်း တိမ်းမှောက်၊ ရေလုပ်?